ပြည်သူတွေ USDP ပါတီကို ပြန်လည်တမ်းတနေဟု စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဟောင်း ပြောကြား — မြန်မာဌာန
ပြည်သူတွေ USDP ပါတီကို ပြန်လည်တမ်းတနေဟု စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးဟောင်း ပြောကြား
ပြည်သူတွေဟာ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ကို ပြန်လည်တမ်းတနေပြီး၊ လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရင် သူ့မဲဆန္ဒနယ်မှာ အနိုင်ရမှာ သေချာတယ်လို့ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် USDP ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဟောင်း ဦးမြင့်လှိုင်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသန့်ဇင်ထွန်း ကတေ့ာ၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူထုထောက်ခံမှု ပိုမြင့်လာတဲ့အတွက် သူသာလျှင် မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရနိုင်မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အစိုးရလက်ထက်မှာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ အငြိမ်းစား ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ဟာ၊ အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၂၀၁၅ တုန်းက သူအရေးနိမ့်ခဲ့တဲ့ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှာပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေဟာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရကို ပြန်လည်တမ်းတနေပြီလို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမြင့်လှိုင်က RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ပြည်သူလူထုဟာ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အကျပ်အတည်းတွေက လွန်မြောက်နိုင်ဖို့အတွက် ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့ တကယ့် တိုင်းပြည်ကို သစ္စာရှိရှိနဲ့ တကယ့် တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ စေတနာမှန်မှန်နဲ့ လုပ်ဆောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်မယ့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို ပြန်လည်တမ်းတနေတယ်လို့ ကျနော် အလေးအနက် ပြည်သူရဲ့အသံတွေ၊ ပြည်သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကျနော် ကြားတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော့် မြို့နယ်မှာလည်းပဲ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အစစ်အမှန် ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အောင်နိုင်မှာ သေချာပါတယ်လို့ ကျနော် RFA သတင်းဌာနကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဖြေကြားလိုပါတယ်ဗျာ"
ဦးမြင့်လှိုင်ဟာ လက်ရှိမှာ USDP ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်နဲ့ ပါတီရဲ့ နေပြည်တော် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ‌ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဝါရင့်အကြံပေးတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေ ဆန္ဒမဲ မပေးနိုင်တဲ့ ဒေသတွေ ပိုများလာတာကို စိုးရိမ်တယ်၊ သံသရာ တစ်ပတ်ပြန်လည်လာပြီး တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းတဲ့ အခြေအနေမျိုး ထပ်မဖြစ်စေဖို့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတ သန့်ရှင်းတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးကို အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့လည်း ဦးမြင့်လှိုင်က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာ USDP နဲ့ အာဏာရပါတီ NLD ကို ထောက်ခံသူတွေကြား ပဋိပက္ခတွေ ပိုများလာတာဟာ အစိုးရက ဒိုင်လူကြီးနေရာကနေ မရပ်တည်ဘဲ အင်နဲ့အားနဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရာကနေ ပြိုင်ဘက်ပါတီတွေနဲ့ ပွတ်တိုက်မှုတွေ ဖြစ်စေတယ်လို့ သူက ဝေဖန်ပါတယ်။
လက်ရှိ အာဏာရ NLD ပါတီကနေ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဦးသန့်ဇင်ထွန်း ကတော့ “၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကို လူထုထောက်ခံမှု ပိုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက် မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ အနိုင်ရမယ်” လို့ ယုံကြည်နေပါတယ်။
"ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ရာခိုင်နှုန်းများများနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားနိုင်မယ်လို့ ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြင့်တက်လာပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ ၂၀၁၅ မှာ ကျတော်တို့ကို လုံးဝအ၀င်မခံတဲ့ရွာတွေ ရှိပါတယ်။ လုံး၀ အဝင်မခံဘဲနဲ့ ကျတော်တို့ကို သူတို့ရွာတွေမှာ မဲဆွယ်စည်းရုံးတာတွေ လာမလုပ်ဖို့ နှောင့်ယှက်တာတွေ ဟန့်တားတာတွေ အဝင်မခံတာတွေ တိုက်ခိုက်တာတွေ ဒါတွေရှိပါတယ်။ အခု ၂၀၂၀ မှာတော့ အဲဒီရွာတွေကိုလည်း ကျနော် နှစ်ကြိမ်စီရောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကလို ကျနော်တို့ကို တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေ မဝင်အောင် တားမြစ်တာမျိုးတွေ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အဲတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ နိုင်ငံရေး အယူအဆကတော့ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်"
ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ ဦးသန့်ဇင်ထွန်း တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်း အဓိကပြိုင်ဘက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးသန့်ဇင်ထွန်းက မဲအရေအတွက် ၉၄၂၁၊ USDP က ဦးမြင့်လှိုင် က ၇၂၉၆ မဲ ရခဲ့တာကြောင့် NLD က မဲအရေအတွက် နှစ်ထောင်ကျော်နဲ့ ကပ်ပြီး အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရ၊ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှာ ကျေးရွာ ၂၈ ရွာနဲ့ ရပ်ကွက် ၂ ခုရှိပြီး စုစုပေါင်း မဲပေးနိုင်သူအရေအတွက် သုံးသောင်းတစ်ထောင်နီးပါး ရှိပါတယ်။
အခု ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအဖြစ် NLD၊ USDP၊ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ PPP၊ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP အပါအဝင် ပါတီ ၆ ခုက ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၆ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာပါ။
တပ်မတော်မှာ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးတဲ့ UBP ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကြည်ထွဋ်ဝင်း ကတော့ “သူဟာ စစ်သားတစ်ဦး ဖြစ်တဲ့အတွက် အောင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
"ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကား ကိုယ်စီးပေါ့။ ရွှေမန်းသူစီးစီးပေါ့၊ ဒီလိုပဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကား ကိုယ်စီးကြပေါ့ ဟုတ်တယ်မလား၊ ကားကကွာ အနီတစ်စီးရှိတယ်၊ အစိမ်းတစ်စီးရှိတယ်၊ အပြာရှိတယ်၊ အဝါတစ်စီးရှိတယ်လေ လောလောဆယ် ကားလေးစီး တွေ့နေမှာပဲ။ အဲဒီကားလေးစီးထဲက ကြိုက်တာစီးပေါ့ ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကွာ ငါတို့က စစ်သားဆိုတော့ ငါတို့က အောင်စိတ်အပြည့်ရှိတယ်၊ အောင်စိတ်ဆိုတာ သိတယ်မလား တိုက်ရင်အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကတော့ အပြည့်ရှိတယ်၊ ပြောဖြစ်အောင်ပြော ငါတို့မှာ အောင်စိတ် အပြည့်ရှိတယ်"
အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်တဲ့ ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ UBP ရဲ့ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကြည်ထွဋ်ဝင်း ဟာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးအဖြစ် ဦးမြင့်လှိုင် တာဝန်ယူခဲ့စဉ်အချိန်က၊ သူကလည်း အဲဒီဝန်ကြီးဌာနမှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်သူငြိမ်း ကတော့ “NLD ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရသက်တမ်း ငါးနှစ်ကာလမှာ စွမ်းဆောင်ချက်အပေါ် ကြည့်ပြီး၊ မဲပေးသူ လျော့ကျသွားနိုင်တဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ မြင်ရတယ်၊ USDP ပါတီ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှု၊ ဒေသအခြေအနေကိုကြည့်ပြီး ဆောင်ရွက်တဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ် မူတည်ပြီး မဲရလဒ် အပြောင်းအလဲ ရှိလာနိုင်တယ်”လို့ သူ့အမြင်ကို RFA ကို ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂၀၁၅ ‌ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ NLD ပါတီက တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၃၉၀ အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး၊ USDP ပါတီက ၄၁ ဦးသာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်မှာ လူဦးရေ ၁၀ သိန်းကျော်ရှိပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လက်ရှိ အချိန်အထိ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မဲပေးနိုင်တဲ့ မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း ရှစ်သိန်း ခြောက်သောင်းခန့် ရှိပါတယ်။
Everybody knows he isaone of military dictators ruling brutally Myanmar for many years. USDP leaders and followers disobey the Rule of Law for all people in Myanmar. Looking back many decades ; seen how badly damage in nature of Myanmar is and how low the level of Myanmar Education becomes. Shame for his speech " people want them to be in power".